Xagee ayaad Umalaynaysaa In ay Iska Shabahaan Ina Dhuubo Iyo Tamuuje [Ninka Jaaliyada Southall Ku Qabiilka ah] Xageese Iska Shabahaan Maadey Iyo Ina Iley – Rasaasa News
Aug 13, 2009 Jwxo-shiilada
Waxaa dhab ah in dadka qaarkii meelo badan iska shabahaan iyaga oo aan uur hooyo ka soo wada bixin, ilmo Aabana ahayn, waxaa kale oo dhacda in dadka qaarkii iyo dugaagu ay dabeecado iska shabahaan hadiiba ay degaan ku wada nool yihiin, ma xumo in ay wadaagaan dabeecadaha wanaagsan, laakiin waxaa dhibaato in ay wadaagaan dabeecadaha xun xun.
Waxaa jiray nin si wayn dalka Ingriiska khaasatan magaalada London dhibaato badan bulshada reer ogaadeniya ku hayay haday noqoto dhinaca war xumo tashiilka,diin nacayb, isku dilka bulshada, been abuurka, tuuganimada iyo waliba ku xariiftanka dhinaca laba wajiilanimada ninka oo lagu magacaabo Tamuuje, is kuna magacaabay in ay jaaliyada Southall ee hindidu dhashay, ayaa wuxuu meelo badan ka shabahaa saaxiibkiis ina dhuubo oo isaguna muddo kula soo dhex jiray halganka reer ogadeenya ee JWXO hormuudka ka ahayd hagar daamooyin badan oo ay ka mid yihiin laba wajiilenimo, isku dir,been abuur, war xumotashiil iyo diin nacayb iyo waliba ku sifoobid iyo nacayb iyo cadaawad uu u qaaday dadka diintu ka muuqato.
Labadan dhagar qabe oo lasheegay in ay isu faragodeen si ay u sii afuufaan, una kala dilaan bulshada ayaa la sheegaa in habeenkii saqda dhexe ay Taleefoonada isugu sheegaan beeno iyo sidii dadka waswaas loo sii galin lahaa iyo in uu mar walba daacad u ahaado jwxo-shil oo uuna mid koodna geeri iyo nolol ka warqabin Jwxo-shil.
Cadaani [ina dhuubo] oo isagu ku jira da`a 60aad oo ah nin la heshiinin oo hore ay uga carareen saddex haween ah, ayaa xagga dabamarka guryaha iyo dabagurka haweenka waxoogaa baac ah dheer ina tamuuje, halka ina southall uu isaguna bulsho nabad kusoo toostay dhiilo galinteeda uu kaga xariifsan yahay saaxiibkiis.
Labadan nin oo ku kala safnaan jirtay Jwxo-shil iyo safaarda Itoobiya ayaa la sheegayaa in uu isu keenay hal cudur, oo ah waxaa nalaynaya reer hebel!!!.
Warar hoose ayaa sheegaya in Tamuuje uu soohelay Gabar qolyaha guurku u saldhigi waayay ah oo Jwxo-shiil qoyskiisa ah, lana doonayo in Ina dhuubo hoosta loo galiyo si difaaca Jwxo-shiil uu u labanlaabo, arintan ayaa waxaa fikirkeeda keenay Ina Southall isaga oo baryahan dad hoose arintan kuxansaday.
Muudeey ayaa isaga lagu sheegaa nin kalsoonidu ku yar tahay, kana hela hoos guurka, arimahan oo dhaqan ahaan lagu yaqaano dadka Keenyaatiga ah oo dadkana afka uga qosla mindidana u soofaysta, arintan oo dadku u badin ahayan in ay tahay dhaqan uu kala yimid Kenya wuxuu ka mid ahaa xubnihii Jwxo-shiil sida wayn uga soo horjeeday markii danbana ku hadaaqay in Jwxo shiil laga gardaran yahay lagana kari la`yahay reer hebel!!!
Muudeey ayaa wada olole uu doonayo in uu kaga tuuro Jwxo-shiil booska Jwxoshiilnimada, isaga oo beryahan danbe bilaabay in uu qolyo dhawr ah ku qanciyo in la qabto shirwayne si Jwxo-shiil meesha looga saaro, ninkan oo moodaya bulshada uu la hadlayo sida midda Jwxo-shiil oo kale oo halganka u galay qoys kujabhad ayay dadku aad ula yaabeen markii uu dad khaas ah arintan ku xansaday.
Kalsooni darada muudeey ayaa waxay gaarsiisay in uu bulshada ku qanciyo in warkan uusan Ina dhuubo maqlin, isaga oo ku macneeyay in uu yahay nin maan gaaban siyaasadna lahayn waxa meesha loo joogana fahmaynin iyo in waliba laga qariyo beesha uu ka soojeedo nin uu ku sheegay in uu dhib badan yahay, qabyaaladuna jexday oo London degen laguna magacaabo Cabdi Badal.
Hadaba, waxay sidan oo kale ay haysataa Ina Ileey oo u muuqda mid meel cidla ah ka taagan bulshadii reer ogadeeniya oo uu ka dhigay wax gacantiisa lagu dilay iyada oo dad kale isticmaalayaan iyo wax uu isaguba dilay, tani waxay keentay in isaga iyo Da,ud Amxaar uu is aaminkii ka dhamaaday ayna kaliftay in labadoodiiba go`aansadan in midba midka kale aamini waayo.
Waxaa sugan in Da,ud Amxaar diiday in uu safarkiisa waqooyiga Ameerika uu ku qorshaynayo uu diiday in uu Ina Ileey kaga yimado booskiisa, isaga oo ka doorbiday in sida boorsada garab socdo feedhadhka London iyo Waqooyiga Ameerika ku sugayana isga dhigo Ina Ileey, maadama uu Da,ud yahay nin gaaban oo waliba tabar daran.
Warar xog ogaal ah ayaa iyagu sheegaya in Ina Ileey iyo Da,ud Amxaar qorshaysteen in ayna soo laabanin taas oo muujinaysa in nin waliba uu soo qaadanayo xaaskiisa iyo wixii caruur ka joogay oo ay Fisoyinkii [visa] u soo wada qaateen.
Waxaase ku sugaya meesha ay rabaan in ay xaasaskooda ka dhiiban bulshawaynta ay reerahoodu ku gumaadeen, kana qixiyeen dhulkoodii hooyo iyaga oo aan wax danbi ah galabsan, dadkan ayaa diyaariyay qareeno khaas ku ah dacwadaha noocan oo kale ah.
Safarkii Kaalinka 5aad iyo Seetadii reer galbeedka waa ciwaanka xiga safarka ka dib.